हाम्रो लागि लेख्नुहोस् - Victor Mochere
हाम्रो ब्लग एउटा सूचनात्मक साइट हो, ग्याप्स वा समाचार बाहिरी छैन। यो साइट को मुख्य फोकस को रूप मा अधिक जानकारी अनलाइन छ। हाम्रो पाठकहरूले अहिलेबाट एक दशकमा उपयोगी पाउने जानकारी पाउनेछन्। यदि तपाईं प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ victor-mochere.com, तपाईंलाई जाँच गर्न आवश्यक छ कि यदि तपाईंले निम्न आवश्यकताहरु पूरा गर्नुभयो भने कृपया तिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्।
हाम्रो ब्लगमा प्रकाशित कसरी गर्ने
यो साँच्चै धेरै सजिलो छ, तपाईले मात्र यी आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। हामी एक सङ्ग्रह साइट बनाए राख्दछौं, सख्त ढाँचा र घुमेको सामग्री पछ्याउँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई सूचित गर्ने तरिकामा
1। लम्बाइ - कम्तिमा words०० शब्द वा अधिक
2। originality - तपाइँको पोष्ट अद्वितीय, वास्तविक हुनुपर्दछ र कहिँ पनि पोष्ट गरिएको छैन
3। संरचना - एक परिचय, शरीर र यदि सम्भव छ भने, एक निष्कर्ष छ। टेबुलट गर्न सकिने सामग्री, कृपया तालिका फाराममा त्यसो गर्नुहोस्
4। दृश्यहरू - हरेक पोष्टको एक स्पष्ट र गुणस्तरको चित्र हुनुपर्दछ। हामी १००० px द्वारा p०० px प्रयोग गर्छौं
5। लिङ्कहरू र सन्दर्भहरू - कृपया उपयुक्त सन्दर्भहरू प्रयोग गर्नुहोस् यदि जानकारीको स्रोत अरू कोही छ भने
6। शीर्षक - एक आकर्षक र कार्य योग्य शीर्षक छ कि सजिलै एक पाठक को ध्यान आकर्षित गर्न सक्दछ
7। प्रासंगिकता - तपाईंको पोष्ट हाम्रो १० कोटिहरूमा फिट हुनुपर्दछ; धन, व्यवसाय, शिक्षा, यात्रा, टेक, बैठक, मनोरन्जन, राजनीति, खेलकुद र जीवन ह्याक्स
8। गुणस्तर - आफ्नो टोन र व्याकरण जाँच गर्नुहोस्। गल्तीहरूलाई सबै मूल्यमा बेवास्ता गर्नुहोस्
9। क्याप्सन - तपाईंको पोष्ट राम्रोसँग अनुसन्धान हुनुपर्दछ र तथ्यहरूमा आधारित छ। हामी धारणा वा विचारहरू स्वीकार गर्दैनौं
10। वैधता - सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले पेश गर्नुभएको लेख लामो अवधिको लागि अर्थपूर्ण रहनेछ
11। एसईओ - सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पोष्ट एसईओ अनुकूलित छ। उदाहरणको लागि तपाईंको शीर्षक characters० क्यारेक्टर भन्दा कम हुनुपर्दछ, कुञ्जी शब्दहरू सुझाव दिनुहोस्, छवि jpg ढाँचामा कम्प्रेड हुनुपर्दछ, आदि।
के हामी स्वीकार गर्दैनौं
गुणस्तर लेख उत्पादन गर्न प्रयास र समय लाग्छ। त्यसोभए, तल वर्णन गरिएको एक लेख प्रस्तुत गर्नबाट जोगिन।
a. सबै कुरामा राखिएको छ यो ब्लग पहिले
b. केहि पनि धेरै प्रचार हो
c. माथि उल्लिखित आवश्यकताहरूको कमी जो केहि पनि
d. सबैले अपमानजनक वा गलत जस्तो देखिन्छ
e. पढ्न गाह्रो र लेखन लेख्न गाह्रो
f. केहि गरीब गरी अनुसन्धान गरीएको छ
g. केहि चीज जो कि साहित्यिक हुन्छ
h. केहि विचारहरु जुन मात्र मान्य मा आधारित छ वा काम अनुमान गर्दछ
i. राजनीतिक रूपमा प्रेरित वा गठित सबै कुरा
तपाईंको ईमेल पठाउनु भएपछि के हुनेछ?
हामी ध्यानपूर्वक एक हप्ता भित्र तपाइँको सबमिशन को माध्यम बाट पढ्नेछौं र तपाइँलाई जवाफ दिनेछौं। यदि तपाइँको सबमिशन योग्य छ, यो पोस्ट गर्नु भन्दा पहिले, हामी तपाइँलाई हाम्रो साइट मा प्रत्येक विवरण भरिएको संग एक खाता बनाउन को लागी आवश्यक छ, हामी तपाइँ तपाइँको लेख को लागी क्रेडिट दिन चाहन्छौं। तपाइँलाई सूचित गरिनेछ जब तपाइँको लेख पोस्ट गरीएको छ। यदि केहि हराइरहेको छ वा यदि हामी तपाइँको सबमिशन पोस्ट गर्न सक्दैनौं, हामी तपाइँ अनुसार सूचित गर्नेछौं।
नोट: यदि तपाई हाम्रो साइटमा लामो-समय योगदानकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ भने, दयालु हामीलाई हाम्रो माध्यमबाट पुग्नुहुन्छ सम्पर्क पृष्ठ। अन्यथा, तलको फारम को उपयोग गरेर तपाइँको सबमिशन पठाउनुहोस्।
स्रोत URL, यदि कुनै पनि
तपाईंको स्वीकृतिको आवश्यकता निश्चित गर्नुहोस्
म पुष्टि गर्दछु कि मैले माथिका आवश्यकताहरू पढ्न र बुझेको छु, र मेरो पेश्कीले सबै उल्लिखित दिशानिर्देशहरू पूरा गर्दछ।